Qarax Xooggan oo goordhow ka dhacay gobolka Sh/dhexe & Khasaaro dhimasho oo jira | SMC
Home WARARKA MAANTA Qarax Xooggan oo goordhow ka dhacay gobolka Sh/dhexe & Khasaaro dhimasho oo...
Qarax Xooggan oo goordhow ka dhacay gobolka Sh/dhexe & Khasaaro dhimasho oo jira
Wararka aan ka hlayno Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ku warramaya in Qarax khasaare badan dhaliyay uu ka dhacay Gobolkaasi, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan oo la xariira qaraxaasi.
Qaraxa ayaa si gaar ah uga dhacay degaanka Miir-tuuge oo u dhaw degmada Mahaddaay ee Gobolka Shabeellaha dhexe, waxaana la sheegay in qaraxu uu ahaa miino dhulka lagu aasay oo lala beegsaday Mooto ay saarnaayeen dad shaacb ah oo waddada marayay, waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaaray dadka shacabka ah ee Miinada lagu bar-tilmaameedsaday.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa sheeegay in ay maqleen jugta qaraxa oo aahyd mid xooggan, isla markaana laga maqlayay degaanada ku teedsan halka uu qaraxu ka dhacay.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaas ku dhimatay laba ruux oo shacab ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen seddex kale, kuwaas oo loola cararay goobaha caafimaadka.
Gobolka Shabeellaha hoose ayaa tiro dhowr jeer ah waxaa uu ka dhacay Gobolkaasi, waxaana inta badan ku waxyeelooba dadka shacabka ah eek u dhaqan Goboklkaasi, walina saraakiisha Ammaanka Gobolka Shabeellaha dhexe wax war ah kama soo saarin qaraxaas lagu laayay dadka shacabka, sidoo kale ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxa.
Previous articleGolaha Ammaanka ee QM oo kulan deg deg ah ka yeelanaya xaalada Soomaaliya
Next articleWafdi uu hoggaaminaayo Qoorqoor oo gaaray Guriceel